Ingoma Yobisi - I-Airbnb
Firefly, New South Wales, i-Australia
Ukudala, ukubuka izinyoni, ukuya eholidini, noma ukudlula nje? Lo mlando wobisi womndeni ongama-15mins usuka ku-Pacific Highway, e-Nabiac, ube yisitudiyo somculo lapho izingoma zindiza phakathi kwe-Nashville, LA, ne-Firefly. Namuhla, indawo esanda kulungiswa ngaphansi kwe-Morton Bay Fig ephakeme - ekahle kakhulu ukuze udale noma uvele uhlehlele emuva, uphumule, iwashi lezinyoni futhi uhlole amabhishi amhlophe, ingemuva lentaba, noma imifula eseduze yase-Forster, i-Taree ne-Gloucester.
Kukhona isiqandisi esigcwele amaqanda amahhala endawo, ujamu, ubisi, itiye, ikhofi. Isidlo sakusihlwa singatholakala eduze kwaseKrambach noma eNabiac Hotels edume ngokulinganayo, noma wamukelekile ukusebenzisa i-BBQ nezindawo zasekhishini ezinikeziwe. Isifudumezi somlilo setha ithoni efudumele ebusuku obubandayo, futhi isiphephetha-moya siyawuvala umkhawulo ehlobo.
Ukuphuma kwelanga, ukushona kwelanga, izindawo zokudala ezibekwe ngaphakathi nangaphandle kwestudiyo, leli yikhaya lapho izivakashi zingathatha khona isikhathi sazo ukuze ziphefumule ngokujulile futhi ziphumule. Phakathi kwamadolobha amakhulu amathathu, amabhishi amaningi namachibi, amadolobhana amabili anamachibi namashibhi, kunokuningi ongakhetha kukho. Futhi amaculo ezinyoni maningi, akhuthazwa umfudlana nezihlahla ezizungezile - indawo lapho isikhathi simi khona.
Ngokuhlonipha ubumfihlo bakho, sihlala nezingane zethu ezimbili eziyinhloko kanye ne-border collie engaphansi kwamam angu-100, uma kukhona okudingayo. Vele ushayele!
Inombolo yepholisi: PID-STRA-12938
Hlola ezinye izinketho ezise- Firefly namaphethelo